Mageia 4 misy | Avy amin'ny Linux
mofomamy | | Fitsinjarana
Amin'ny maha-zava-baovao antsika dia manana ny dingana rehetra ny ankamaroan'ny fitaovan'ny fizarana GTK + 2 a GTK + 3 toy ny RPMDRAKE na USERDRAKE, ohatra. Ho fanampin'izay, ny fanovana ny usermode a polkit ho an'ny fanamarinana ho faka.
Lojika, fanavaozana ireo fonosana fizarana toy ny:
Firefox ESR (izany hoe Firefox 24, tokony hametraka ny kinova ankehitriny izy ireo)
… Ankoatry ny hafa
Ho an'ireo izay tsy manohana ny GNOME Shell dia afaka mametraka izao MATE 1.6 y kanelina avy amin'ny repo ofisialy na avy amin'ny DVD. Misy ihany koa Xfce, LXDE y RazorQT; Manome safidy malalaka antsika izy ireo.
Ny antsipiriany tsara amin'ity fanontana ity dia MageiaWelcome izay miseho rehefa miditra voalohany ianao. Manome antsika famerenana kely ny distro miaraka amin'ny safidy mametraka codecs sy fampiharana malaza toy ny Firefox, VLC, Flash sns.
Codecs sy ny hafa
Manoro hevitra mafy an'ity distro ity aho, mety tsy ho an'ny mpampiasa vaovao tanteraka fa ho an'ireo izay manana hevitra momba ny GNU / Linux ary mila rafitra izy ireo mora ampiasaina ary manana tsara fifandanjana eo amin'ny fitoniana sy ny faharetan'ny fotoana.
Izaho amin'ny anjarako dia efa nametraka azy:
Miakanjo avy any Caledonia
Ampidino ny Mageia 4
Avoahana naoty | Anglisy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Mageia 4 misy
Misaotra, efa nanandrana ny Mageia 4 tamin'ny beta aho ary tena mandaitra izany, nefa teo am-piandrasana ny fivoahana farany dia nametraka ny Netrunner 13.12 (64) aho ary izao dia voasariky ny saiko, na izany aza, hampidina an'i Mageia aho ary hametraka azy amin'ny kapila sy test manokana .
Ny tiako momba an'i Netrunner dia ny fahitako .deb sy toerana fitahirizana programa ilaiko, na dia manana isa maro aza i Mageia ... Eny ... ny safidy farany eo amin'izy roa ireto dia ho sarotra ny hiala amin'ny maha rafitra lehibe indrindra ahy, hitandrina ny hevitra hitarihana ahy bebe kokoa.
Eny, nivoaka avy tao Ubuntu i Netrunner ka antenaina izany.
Mageia repos dia salama tsara fa rehefa mila zavatra avy amin'izy ireo ianao dia afaka maharary aretin'andoha ... indraindray.
Misy admin afaka manova an'io "kinova" io ve? nandao ahy 😛
Efa nametraka azy io aho ary tena mandaitra, niaraka tamin'i Mageia aho hatramin'ny nivoahany voalohany, mamporisika anao aho raha mbola tsy nahita azy io, mba hamarinoanao ity rohy nampakariko vao haingana ity: https://www.google.com/url?q=https://blog.desdelinux.net/mageia-3-que-hacer-despues-de-instalacion-personalizacion-y-mejoras/&sa=U&ei=QKnuUujbMZKA7Qa0iYHYDg&ved=0CAsQFjAA&usg=AFQjCNEQOF1yjcHlC2tzEF6WG6nWEnwiBA
Ity dia torolàlana ao amin'ny Mageia 3, fa izy io dia mety ihany koa ho an'ity kinova ity.
Eny hitako io, tena feno. Ary raha ny marina satria tsy manao fanovana mahery vaika i Mageia dia manohy manompo.
mandriva sa ubuntu iza no tsotra?
John titor dia hoy izy:
Milamina sy ara-potoana. Toa mahaliana izany, tsy mbola nampiasaiko, fa toa OpenSUSE ilay izy. Mitondra nostalgia ho ahy izy io, tsy azoko antoka ny antony tsy itiavako azy intsony, heveriko fa tsy tiako fa ny rafitra no nanao ny zava-drehetra ho ahy.
Valiny tamin'i John Titor
Mageia 4 iray amin'ireo rafitra ankafiziko indrindra miaraka amin'ny kde ary ankehitriny dia misy cinnamon 2.0.4
Toa milay be Mageia 😀
Ny zavatra mahafinaritra dia ho an'i Caledonia sy ny famatsiam-bola mihoatra ny zava-drehetra.
Alberto Villa dia hoy izy:
Fantatrao raha manohana Steam?
Mamaly an'i Alberto Villa
Miala amin'i Nautilus / File ny Ubuntu, hanana mpitantana rakitra manokana izy io
Ahoana ny fametrahana LibreOffice 4.2 amin'ny Ubuntu